Abavelisi bePlastiki kunye nababoneleli-China iPlastiki yefektri
Cacisa uLuhlu lwePlastiki yeSushi yeplastiki
Nokuba uceba ukutshintsha ibhokisi ye-sushi elahlwayo, okanye ufuna iimveliso ezifanelekileyo ngamaxabiso ezoqoqosho, thenga izixhobo zombane kwi-Intanethi kwiQela laseChunkai. Iimveliso zethu zifunwa ngokubanzi phakathi kwabaxumi ngenxa yeempawu zazo ezinje ngolwakhiwo olomeleleyo, anti-inkungu, ukumelana nerusi kunye nobomi benkonzo ende. Ngoncedo lweengcali zethu, sinikezela ezi mveliso ngobukhulu obahlukeneyo ngokweemfuno ezahlukeneyo zabathengi bethu abaxabisekileyo. Ukongeza, inkampani yethu igxile kwimveliso yebhokisi yebhodi ye-sushi, ibhokisi yeplastiki esetyenziswayo.
Iplastiki Fine Mist sisitshizi kunye Overcap
Iipistile ezintle zitshiza ngobunono izinto kwindawo enkulu. Ngokungafaniyo nokugalelwa kweemveliso, xa usebenzisa i-mister caps, izinto azizithambisi okanye zizalise iindawo, kodwa endaweni yoko, zisebenzisa umaleko omncinci weemveliso, oludibaniso lwezinto ezinje ngokutshiza kweenwele kunye neziqholo. Isixa esisetyenzisiweyo sinokulungiswa ngokutshiza ngaphezulu. Xa kuziwa ekusebenziseni i-air fresheners, ilifu le-mist efanelekileyo lisasazeka ngokulula njengoko lihlala emoyeni ixesha elide kwaye amasuntswana alula. Ngelixa ezinye iisepha zinokuba zilunge ngakumbi ekusebenziseni i-trigger sprayers, ehambisa imveliso ngaphezulu komphezulu kuqhushumbo olukhulu, ukucoca iifestile kunye neemveliso zokucoca iinkuni zihlala zilunge ngakumbi xa zitshizisiwe ukusuka koomatshini abacocekileyo.
Ezilahlwayo Spoons Iimela Fork Cutlery Tableware
Izipuni ezilahlwayo Iimela zeeFolokhwe zokuTya ukutya zenza ukuba ubomi bube lula kumashishini, abathi endaweni yokuhlamba iifolokhwe zesinyithi, amacephe kunye neemela, banokucela nje abasiki balahle izixhobo zabo bakugqiba ukutya. Ikwenza ubomi bube lula kubathengi ababamba iminyhadala okanye amaqela anesixa esikhulu seendwendwe.
Umshini wokuGcina iiNgxowa kuMgcini weSithuba
Iingxowa zokucoca okanye iingxowa zokucinezela sele zithandwa kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo njengoko abantu abaninzi beqalisile ukucofa iimpahla kunye namalaphu okonga indawo.
Isebenza ngayo nayiphi na into yokucoca, yipakishe. Ukugcina indawo yokugcina, indawo engama-80% incitshisiwe
Itywina elitywinwe kabini ligcina lingangeni moya kwaye lingena manzi, ikliphu yesixhobo eqhotyoshelwe kwingxowa nganye
Akukho mkhuhlane nesikhunta, khusela iimpahla zakho, izinto zokulala, iipilo, iingubo
350ml Fat U-imilo Pet Plastic Ijusi Bottle
Iibhotile zePlastiki zePlastikhi ezingama-350ml ezi-U ziyintle kakhulu, zilungele ijusi, iziselo kunye namanzi.Iyisebenzisa ibakala lokutya i-PET, i-BPA isimahla, ifaniswe nobungqina bokuba ikepusi. logo kwibhotile.
Iingxowa zeengubo zePlastiki zePlastiki ezingafaniyo
Iingxowa zeengubo zePlastiki zePlastiki ezingafaniyo zenziwe ngezinto ezintsha ze-PE, ukomelela okuqinileyo, ukubonakala okugudileyo, kulula ukubhala, intle kwaye inesisa, inokubhalwa kwaye iprintwe. uphawu lokutywina.
I-Chubby ecacileyo yobisi lweTi yePetile
Ibhotile ye-Chubby ecacileyo yobisi ye-Pet Bottle intle kakhulu, ilungele iti yobisi, iziselo kunye namanzi.Iyisebenzisa ibakala lokutya i-PET, i-BPA yasimahla, ifaniswe nobungqina bokuba ikepusi. ibhotile.
Uyilo lwebhotile eyoyilo lokuYila
Ibhotile yokuGuqula eyi-Conical Conical Shaped yokuthabatha i-Takeaway intle kakhulu, ilungele amanzi amaminerali, iziselo kunye namanzi.Iyisebenzisa ibakala lokutya i-PET, i-BPA yasimahla, ifaniswe nobungqina bokuba ikepusi. ibhotile.
Ukuqhekeza ichaphaza lokuvala intambo yenkunkuma ngokuzenzekelayo
Ingxowa yamachaphaza okuzalisa intambo yenkunkuma yenziwe ngezinto ezintsha ze-HDPE, ukomelela okuqinileyo, ukubukeka okugudileyo, kulula ukuyibhala, intle kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Igumbi ezimbini zePlastiki zokutya
Esi siCwangciso sePlastiki sokutya esiBini sithandwa kakhulu kwaye siyathengisa,
Gcina ukutya kukutya okutsha: Ibhokisi enkulu yokutya isidlo sangokuhlwa ukugcina ukutya kwakho kukutsha kunye nokutya kwangaphambili.
Ukhuseleko: Isikhongozeli kunye nesiciko zenziwe yi-BPA-Simahla kunye nokutya okuya kwiBakala ekhuselekileyo ye-PP.
Inokuphinda isebenze kwaye ihlale ixesha elide: Isikhongozeli senzelwe ukubambeka kwisikhenkcezisi okanye ibhegi yesidlo sasemini, ngobungqina obuvuzayo kunye nesivalo esomeleleyo somoya.
I-Microwave / Freezer / Isicoci esihlanjwa kwindawo ekhuselekileyo kwiRack ephezulu: Melana nobushushu ukusuka -40 ° F ukuya kuma-320 ° F (Okanye -40 ° C ukuya kwi-160 ° C)
Umshini wokutywina iibhegi zoGcina ukutya
Ezi ngxowa zokuVala iZinto eziVutha ukuGcina ukutya zithandwa kakhulu kwaye ziyathengisa.
Ukhuseleko: I-BPA yasimahla, yenze isimilo kunye neMicrowave Safe, ilungele iSous Vide Cooking
Inye yabo Bonke: Yenzelwe ukusetyenziswa nabo bonke oomatshini bokupakisha
Umsebenzi onzima: Ibanga lezorhwebo lezinto ezininzi ezikwibhloko yeoksijini kunye nokufuma kunye nokuphelisa ukubanda kwefriji kunye nokoma
Ezoqoqosho: iipakethe ezi-11 `` ububanzi, ii-50 ubude beenyawo. ezingama-100 zizonke. Ukwenza ubude bakho bengxowa.
Ezilahlwayo Takeaway Plastic yoGcino Ukutya Isikhongozelo
Indawo yokuGcina yokutya yokulahla ePlastikhi iyathandwa kwaye iyathengiswa.Ngelixa ukutya ngokwesiko kucingwa njengokuqulathwe kwiipakethi zeblister, inyani kukuba uninzi lweemveliso zabathengi lunokuxhamla ekupakisheni iblister. Olona khetho lubalaseleyo xa ufuna abathengi ukuba babone imveliso yakho kwishelufu yesitolo, iipakethi zeblister zingenziwa ngokulula kunye noluhlu lweempawu kunye nokhetho loyilo lokuhlangabezana neemfuno ezithile zemveliso yakho. Ukupakishwa kweblister kukwenza umsebenzi omkhulu ukugcina iimveliso zakho zikhuselekile ngelixa usenza ukuba kube lula ukufikelela kumthengi. Cinga ngezi zibonelelo zilandelayo zokupakishwa kweblister.